‘कसैको सहयोग पाए बाँच्ने थिएँ’ - Jagaran Post
‘कसैको सहयोग पाए बाँच्ने थिएँ’
जागरणपोस्ट ३ माघ २०७७, शनिबार १८:१५
खोटाङ : दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–५ स–छितापोखरीका ५२ वर्षीय कृष्ण खत्री हप्तामा दुई पटक मिर्गौलाको डायलासीस गराउदा छन् । वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल काठमाडौँमा चार वर्षअघि (विसं २०७३ असार) भर्ना भएर डायलासीस गराइरहनुभएका खत्रीको दुवै मिर्गौला काम नलाग्ने भएको छ ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाका खत्री त्यतिबेला ओछ्यानमा बिरामी परेका थिए । दिनभर घरको काम गरेर बेलुका खाना खाएपछि सन्चै सुतेका खत्री बिहान उठ्दा शरीर सुनिनुका साथै हातखट्टा नचल्ने अवस्थामा ब्युझिएकी उनकी श्रीमती कुमारी खत्रीले बताईन ।
बिरामी भएपछि शुरुमा करीब डेढ वर्ष आफ्नै खर्चमा डायलासीससहित सम्पूर्ण उपचार गराउनुभएका खत्रीले अहिले निःशुल्क डायलासीस गराउँदै आएका छन् । औषधि, खाना तथा कोठा भाडाको रकम तीर्दै आएका खत्रीको अहिले मासिक रु ३५ हजारभन्दा बढी खर्च हुने गरेको जनाइएको छ ।
काठमाडौँको स्वयम्भूस्थित एउटा घरमा कोठा भाडामा लिएर एक्लै बस्दै आएका खत्रीको श्रीमती र दुई छोरा छन् । कान्छा सुदीप नेपाली सेनामा कार्यरत छन् भने जेठा आसन गाईघाटस्थित घरखेती सम्हाल्दै आएका छन् ।
नेपाली सेनाको युद्ध कवाज गण सीता पाइला काठमाडौँमा कार्यरत सुदीपको तलब तथा साहुको ऋण काढेर कृष्णको उपचार गरिरहेको पाइएको छ । “कान्छा छोराको तलब नहुने हो त यसअघि नै मरिसक्थे होला !” बुबा कृष्णले भन्नुभयो, “दुवै मिर्गौला काम नलाग्ने भएपछि कम्तिमा एउटा फेर्नैपर्ने हुँदो रहेछ ! फेर्नका लागि आफूहरुसँग खर्च छैन । कसैले सहयोग गरे एउटा फेरेर भएपनि बाँच्ने थिएँ ।”
मिर्गौला फेर्नका लागि अहिलेसम्म आफूलाई कसैले दिने टुङ्गो नभएको पीडित खत्रीले बताए । “मिर्गौला दिन आफन्त नै चाहिने रहेछ !”, उनले भने , “श्रीमती पनि बिरामी छिन् । उनी स्वस्थ रहेको भए दिने थिइ । छोराहरु आफैले गरिखानुपर्यो ! यदि कसैले दिने नै भएपनि फेर्दा लाग्ने खर्च छैन ।”
घरखेती गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका काका कृष्णको उपचारमा अहिलेसम्म करीब रु २० लाख खर्च भइसकेको पीडित खत्रीका भतिज पत्रकार दिलीप खत्रीले बताए । “काका सैनिक परिवारको भएकाले अस्पतालले वार्षिक रु एक लाख दश हजार बराबरको औषधिमा छुट दिने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले भाइ सुदीपको तलबले खर्च नधानेर घरखेतसमेत बिक्री गरिसक्नुभएको छ ।”
विसं २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट वडा सदस्यसमेत हुनुभएका कृष्ण व्यवसायका लागि उदयपुरको गाईघाट झर्नुभएको थियो । पछिल्लो समय गाईघाटस्थित त्रियुगा नगरपालिका–११ प्रगतिग्राममा बस्दै गर्दा बिरामी परेर उपचार गराइरहेका कृष्णलाई बिरामी भएपछि अहिलेसम्म पार्टीका कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ताले भेटेका छैनन् ।
आफू बिरामी भएपछि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि आफूले सम्पर्क नगरेको मिर्गौला पीडित कृष्णले बताए । “सहयोद्धा सबैलाई सम्झनुहन्छ !”, उनले भने , “अहिले आफूले आस्था राखेकै पार्टी सरकारमा छ । तर, अहिलेसम्म सन्चो/बिसन्चोको बारेमा कसैले सम्पर्क गरेर सोधेका छैनन् । अहिले दुःख लागेर आउँछ ।”
तत्कालीन एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पनि त्रिनपाका नगरसमिति सदस्य रहेका कृष्णकी ५२ वर्षीया श्रीमती कुमारी थाइराइडको बिरामी छन् । बुबाआमा दुवै एकैसाथ बिरामी परेपछि दुई छोरा आसन र सुदीप समस्यामा परेका छन्
प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश
ओली नेतृत्वको दल बाहेकले सूर्य चिन्ह दाबी गर्न
उदयपुरमा श्रीमानको हत्या, श्रीमतीको मुखमा विष दलेर बेहोस
विद्युत् चोरी गरेर पानीतान्ने पम्पबाट खेतमा सिँचाइ